I-ATRIUM SGHISOARA 24 STUDIO - I-Airbnb
I-ATRIUM SGHISOARA 24 STUDIO
Sighișoara, Județul Mureș, i-Romania
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Dis 9.
Isitudiyo esihle nesisha sha esilungisiwe esinomnyango wangasese otholakala emgwaqeni ophakathi nendawo, eduze kwenqaba endala. Igumbi elilodwa lokulala elinemibhede ephindwe kabili, igumbi lokugezela elibanzi, ikhishi elihlome ngokuphelele ngosofa, i-tv, i-inthanethi i-wi-fi. Uzojabulela indawo ethule kakhulu, elungele izithandani, umndeni omncane noma iqembu labantu abangu-3. I-24 Studio iyinhlangano ingxenye ye-Sighisoara ATRIUM, i-bussines yokuvakasha yomndeni. Sinikeza indawo ehlanzekile ekhazimulayo, indawo yokungena yangasese, indawo yokupaka kanye nenkonzo yokuwasha ngokuzithandela.
I-24 STUDIO isethelwe izivakashi ezingu-2-3. Sihlinzeka ngendawo ehlanzekile ekhazimulayo, elungiswe ngokugcwele ngefenisha ephezulu, i-plasma tv kanye ne-inthanethi ye-wi-fi.Ngendawo yokungena yangasese eqonde ngqo emgwaqeni(enekhodi yokufinyelela ) lesi situdiyo sikunikeza indawo ephelele. ubumfihlo kanye nokungena okugcwele.Izindawo zokupaka zisemgwaqweni, eduze kwendlu yethu, zizokhonjiswa kithi lapho sifika.Ikhishi lihlome ngokuphelele, isitolo esikhulu siseduze, ungapheka njengekhaya.Uma uhlala isikhathi eside sihlanzekile indawo kanye ezinsukwini ezi-3 futhi unikeze isevisi yokuwasha.
ubusuku obungu-7 e- Sighișoara
Sitholakala eduze nenkaba yedolobha (400 m), inqaba endala(600 m),isiteshi sesitimela sedolobha(400m) emgwaqeni othule.Emgwaqeni ofanayo ungathola ISupermarket ye-LIDL.(50 m)
I am a passionate traveler,mostly in Romania and Europe driving my motorcycle or flying.Favorite country are Italy,but also Greece and Germany comes in my (Website hidden by Airb…
Sitholakala nsuku zonke kubavakashi bethu phakathi kuka-8-22.Sihlala enkantolo efanayo, i-Sighisoara ATRIUM iyibhizinisi elincane lomndeni lezivakashi.